FAQs - Yangzhou ZhiTong စက်ပစ္စည်း co., Ltd.
လွတ်လပ်သော သွင်းကုန်၊ တင်ပို့ခွင့်ရှိသော စက်ရုံ။
နှစ် 20 ကျော်နေ့စဉ်ဓာတုနှင့်အလှကုန်ထုတ်လုပ်ရေးတွင်အထူးပြုသည်။လေဟာနယ် homogenizer ရောနှောစက်၊ ခေါင်းလျှော်ရည်နှင့် ဆပ်ပြာရည် ရောစပ်စက်၊ သံမဏိ သိုလှောင်ကန် သိုလှောင်ကန်၊ ပိုးသတ်ဆေး ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း ဖြည့်သွင်းခြင်းနှင့် အခြားထုပ်ပိုးသည့် စက်များ။
မင်းရဲ့စက်ရုံတည်နေရာက ဘယ်မှာလဲ။အဲဒီကို ဘယ်လိုသွားကြည့်ရမလဲ။
နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးစင်တာသည် Baiyun ၊ Guangzhou တွင်တည်ရှိပြီး Baiyun လေဆိပ်မှမိနစ် 20 ဝေးသောကားဖြင့်၊
စက်ရုံသည် Jiansu ပြည်နယ်တွင်တည်ရှိသည်။ ရှန်ဟိုင်း Pudong လေဆိပ်နှင့်ပိတ်သည်။
သင့်စက်ရုံသည် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ မည်သို့လုပ်ဆောင်သနည်း။
အရည်အသွေးနဲ့ ဖောက်သည်က ပထမ။တင်ပို့ခြင်းမပြုမီ စက်ကိုစစ်ဆေးရန် ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည် CE နှင့် နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ မူပိုင်ခွင့် ၁၂ ခုကျော်နှင့် BV နှင့် SGS စာရင်းစစ်စက်ရုံတွင် ၂ နှစ်တစ်ကြိမ် ရရှိထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ထံမှမှာယူသောပစ္စည်းများအားလုံးကို ပေးပို့သည့်နေ့မှ တစ်နှစ်အာမခံပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
1. ပုံမှန်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် T/T သက်တမ်း သို့မဟုတ် L/C တွင် အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။
2. T/T သက်တမ်းတွင်၊ ကြိုတင်ငွေ 40% လိုအပ်ပါသည်။နှင့် 60% လက်ကျန်ငွေကို ပို့ဆောင်ခြင်းမပြုမီ အခြေချရမည်။
3. L/C သက်တမ်းတွင်၊ ပျော့ပျောင်းသောအပိုဒ်များမပါဘဲ 100% ပြန်လည်ရုပ်သိမ်း၍မရသော L/C ကို လက်ခံနိုင်သည်။သင်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်သော တစ်ဦးချင်းစီအရောင်းမန်နေဂျာပုံစံ အကြံဉာဏ်ကိုရယူပါ။
ပုံမှန်အားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် စပေါ်ငွေလက်ခံရရှိပြီးနောက် ရက်ပေါင်း 30 ကြာပါသည်။ကြီးကြီးမားမားအမိန့်အတွက်။ညှိနှိုင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။
ပို့ဆောင်မှုအတွက် ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းများ။
Air freight shipping railage ကဲ့သို့သော သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏စက်များကို ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။
အာမခံ တစ်နှစ် တာရှည် ဝန်ဆောင်မှု ပေးဆောင်ပြီး အာမခံ အတွင်း သို့မဟုတ် အပြီးတွင် နည်းပညာဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးမှု အခမဲ့ ပံ့ပိုးပေးပါသည်။အာမခံကာလအတွင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အခမဲ့ပြုပြင်ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးဆောင်ပါသည်။အာမခံကာလပြီးနောက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် လိုအပ်သောပစ္စည်းများ၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုသာ ကောက်ခံပါသည်။
ဖောက်သည်တွေကို ဘယ်လိုစက်မျိုးတွေ ပေးနိုင်လဲ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် စက်အမျိုးမျိုးနှင့် ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းတစ်ခုလုံးကို ကမ်းလှမ်းနိုင်ပါသည်။
(၁) ခရင်မ်ငါးပိ ထုတ်ကုန်များ၊
အလှကုန်လုပ်ငန်းတွင် မျက်နှာခရင်မ်၊ ခန္ဓာကိုယ်ခရင်မ်၊ အဝတ်လျှော်ခရင်မ်၊ ပန်းအိုးစည်း စသည်တို့။
အစားအသောက်လုပ်ငန်းတွင် ငံပြာရည်၊ ketchup၊ ခရမ်းချဉ်သီးငါးပိ၊ mayonnaise၊ မုန်ညင်း၊ ချောကလက်စသည်တို့။
ဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်းတွင်- ဂဟေငါးပိ၊ မှင်၊ ဆေး၊ ဆေးရောင်စုံ စသည်တို့။
၎င်းတို့အတွက် ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း- RO ရေသန့်စင်ခြင်း- ဖုန်စုပ်စက်၊ သိုလှောင်ကန်များ၊ ဖြည့်စက်၊ ထုပ်ပိုးသည့်စက်၊ တံဆိပ်ကပ်စက်၊ conveyor ခါးပတ်-မင်ဂျက်ပရင်တာ အလုံပိတ်စက်၊ ကျုံ့သွားသည့်စက် စသည်တို့။
ခေါင်းလျှော်ရည်၊ ဆေးရည်၊ ဆပ်ပြာအရည်၊ ဆပ်ပြာ၊ ဖျော်ရည်၊ ဖျော်ရည်စသဖြင့်
၎င်းတို့အတွက် ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း- RO ရေသန့်စင်မှု- အရည်ဆေးဖျော်စက်-- သိုလှောင်ကန်များ- အဖြည့်စက်- အဖုံးဖုံးစက်- တံဆိပ်ကပ်စက်- သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးခါးပတ်- မင်ဂျက်ပရင်တာ အလုံပိတ်စက်၊ ကျုံ့သည့်စက် စသည်တို့။
နှုတ်ခမ်းနီ၊ နှုတ်ခမ်းနီ၊ လက်သည်းဆိုးဆေး၊ mascara စသည်တို့
၎င်းတို့အတွက် စက်များ- homogenizer mixer၊ colliod mill၊ lipstick filling machine၊ freezing machine စသည်တို့။
စက်ကို သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း ပြည်တွင်း၌ တပ်ဆင်ရန် သို့မဟုတ် ပြုပြင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ အင်ဂျင်နီယာကို စေလွှတ်နိုင်သော်လည်း ပြဿနာမရှိသော်လည်း ဝယ်ယူသူသည် အသွားအပြန် လေယာဉ်လက်မှတ်ခကို ပေးချေပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ အင်ဂျင်နီယာအတွက် ဟိုတယ်တည်းခိုခကို စီစဉ်ပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။
ပို့ဆောင်ခြင်းမပြုမီ သင့်ကုန်ပစ္စည်းအားလုံးကို စမ်းသပ်ပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့၊ ပို့ဆောင်ခြင်းမပြုမီ ကျွန်ုပ်တို့တွင် 100% စမ်းသပ်မှုရှိပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းကို ရေရှည်နှင့် ကောင်းမွန်သောဆက်ဆံရေးဖြစ်အောင် သင်မည်ကဲ့သို့လုပ်ဆောင်မည်နည်း။
(1) ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအကျိုးရှိစေရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သောစျေးနှုန်းကို ထိန်းသိမ်းထားပါသည်။
(၂) ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖောက်သည်တိုင်းကို ကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဆွေအဖြစ် လေးစားကြပြီး သင်၏မည်သည့်အရပ်မှလာနေပါစေ၊ ၎င်းတို့နှင့် စီးပွားရေးလုပ်ရန် စိတ်ရင်းမှန်ဖြင့် မိတ်ဆွေဖွဲ့ပါသည်။
သတ်သတ်မှတ်မှတ် အရွယ်အစားအတိုင်း ကိုယ်ပိုင်လိုဂို print ထုတ်နိုင်ပါသလား။
Yes.we သည် စိတ်ကြိုက် နှင့် စိတ်ကြိုက် စိတ်ကြိုက် သတ်မှတ်ချက်များ ပေးသည်။
ပုံမှန်အသုံးပြုရာတွင် အရည်အသွေးပြဿနာအတွက် တစ်နှစ်အာမခံနှင့် အခမဲ့ပြုပြင်ပေးခြင်း။
စက်ပစ္စည်းတိုင်းသည် ပြဿနာရှိလာသည်နှင့် သင်္ဘောမတင်မီ စမ်းသပ်စစ်ဆေးမည်ဖြစ်သည်။
delivery.and also support person send the factory inspection လုပ်ပါ။
သင့်အင်ဂျင်နီယာများသည် နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့၊ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ စက်တပ်ဆင်မှု အတွေ့အကြုံ အများကြီးရှိပါတယ်။
သံမဏိ 304 နှင့် 316L အပြည့်ဖြင့် လက်ခံပါ။